Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Manufacturing, Factory အလုပ်အကိုင်များ
စက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ် Jobs in Myanmar
စက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ် အလုပ် 40 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
Production Department မှ ထွက်ရှိလာသော Product များအား စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ စစ်ဆေးပြီး Product များအား Account Department သို ချိတ်ဆက်လွှပြောင်းပေးရမည်။ Customized order များနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများအား လိုအပ်သော requirement များအတိုင်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။
May Kha San
- operation report - factory report - Maketing report & Maketing data entry
အကျိုးအမြတ်: other allowance
အဝတ်ညှပ်သမား/အပ်ချုပ်သမား | Cutter, Tailor
- တစ်ထည်လုံး အပြီးအစီး ကျွမ်းကျင်စွာ ချုပ်တတ်သူများသာ အလိုရှိပါသည်။ - အထည်အရေအတွက်ပြီးစီးမှုအပေါ် မူတည်ပြီး လစာရှင်းပေးပါမည်။
ရာထူး၏ရည်ရွယ်ချက် - စံနမူနာပုံစံအတိုင်း ကုန်ကြမ်းများကို နမူနာယူခြင်း၊ - စံနမူနာပေါ်မူတည်၍ ပို့ဆောင်လာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ လက်ခံခြင်း (သို့မဟုတ်) ရပ်ဆိုင်းခြင်း။ - ထုပ်ပိုးမှုအရည်အသွေးကို ထိန်းချုပ်ခြင်း။ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ - ထုပ်ပိုးခြင်း (သို့မဟုတ်) အရည်အသွေးမကိုက်ညီသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အထက်လူကြီးထံသို့ တင်ပြခြင်း။ - နမူနာများနှင့် analysis ပြုလုပ်၍ ရရှိသော ရလဒ်များကို သင့်လျော်သော အစီရင်ခံစာ၊ မှတ်တမ်းစာအုပ်များတွင် မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း။ - ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများပျက်စီးပါက အရည်အသွေးထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ချက်ချင်းအစီရင်ခံခြင်း။ - လုပ်ငန်းခွင်အတွင် 5S လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။ - အသုံးအဆောင်နှင့် အရင်းအမြစ်များထိန်းသိမ်းမှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: - နေ့လယ်စာစီစဉ်ပေးခြင်း။ - ကျန်းမာရေးအာမခံစီစဉ်ပေးခြင်း။
ထုပ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာ | Process Manager
Yatu Fashion Design School
-သွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရမည်။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ -လစာညှိနှိင်းနိုင်သည်
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်သား၊စက်ကိုင် | Production, Machine Worker
-စက်လည်ပတ်ပါခြင်းအတွက် တာဝန်ယူခြင်း။ -စက်သန့်ရှင်းရေးအတွက် တာဝန်ယူခြင်း။ -(assemble & dismantle) ပြောင်းလဲခြင်း။ -စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသာနာများရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း။ -လုပ်ငန်းစဉ်အတည်ပြုချက်များအတွက် တာဝန်ယူခြင်း။ -သန့်ရှင်းရေးအတည်ပြုခြင်း။ -ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းခွင် သန့်ရှင်းရေးအတွက် တာဝန်ယူခြင်း။ -စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့ကို အစုလိုက်မှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ -လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ -မှတ်တမ်းစာရွက်များ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။ -SOP, GMP, အခြေခံpersonal hygiene နှင့်အညီလုပ်ဆောင်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: - Yearly & Quaterly Bonus ပေးမည်။
- ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံရှိ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြီးကြပ်ခြင်း။ - စက်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ - စက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း၊ productionနှင့်manufacturingပရောဂျက်အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းထိရောက်မှုသေချာစေရန်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ - ထုတ်လုပ်မှု လုပ်သားများနှင့် ကြီးကြပ်ရေးမှူးများကို လှုံ့ဆော်ပေးရင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဆီမှလေးစားမှုကို ရရှိရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ - ကုမ္ပဏီမူဝါဒနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအပါအဝင် ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုအစရှိ စက်ရုံလည်ပတ်မှုများကို တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ - စက်ရုံလည်ပတ်မှု၊ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်များ၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်စံနှုန်းများနှင့်အညီဖြစ်စေရန်စနစ်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်တာဝန်ယူခြင်း။ -စံနှုန်းများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စာရင်းထိန်းချုပ်မှု၊ အစီရင်ခံမှုစွမ်းရည်၊ သတင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခြင်း။ - စက်ရုံအတွင်းရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိရောက်စွာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သော မှတ်တမ်းများအားလုံးကို သေချာထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် စက်ရုံအတွက် ဘေးကင်းပြီး ကျန်းမာသော လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးရမည့်အပြင် စားသုံးသူများအတွက် ဘေးကင်းသော အဆုံးစွန်ထုတ်ကုန်များကိုပါ သေချာစေရန် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: - တစ်နှစ်လျှင် Bonus အဖြစ် တစ်လစာပေးမည် - စားသောက်စရိတ်ပေးမည် - ဖယ်ရီပေးမည် - နေရာထိုင်ခင်းပေးမည်"
-သွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရမည်။ -လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ -လစာ ညှိနှိင်းနိုင်သည်
To ensure that the Brewing process areas are operated in an optimal manner in order to achieve production targets. နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်အဆိုင်းအလိုက် Brewing plan ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ Production plan အတိုင်း လိုအပ်သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းအားလုံးရရှိပြီး Production plan အတိုင်း ပြည့်မီစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ စက်ရုံနှင့် စက်ကိရိယာများကို စစ်ဆေးပြီး စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ စက်ရုံ စတင်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းများကို SOPs အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ SOPs သက်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စက်ရုံနှင့် စက်ကိရိယာများကို သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ Conduct quality tests to ensure cleaning and sanitising is done according to requirements. Carry out walk about inspections and take action on deviations. Measure and record process inputs, outputs and changes and take appropriate action where required. To ensure the effective maintenance of the Brewing plant and equipment to meet brewing production targets. Carry out maintenance tasks as per the schedules. Carry out external cleaning of the plant and work area according to standard procedures. Identify and communicate non routine and breakdown maintenance tasks to relevant personnel. Check and accept the plant as fit and safe for use after planned and or breakdown maintenance. To ensure compliance to the Brewing product quality standards. Take samples, perform quality analysis and record data as required against laid down methods and procedures. Perform and ensure adherence to reference sample analysis requirements and standards. Perform calibration and maintenance of equipment as per laid down procedures. Checks production performance against quality standards. Highlights defective Raw Materials. Capture, trend, display and action Brew house data, including short interval control data sheets, Process monitoring data [inputs and outputs], QC data and downtime data. To ensure that effective teamwork occurs within and across shifts and teams at different levels. Participate in end of shift SBU meeting and communicate problems and potential problems. Handover to the Operator of the next shift communicating performance, problems and changes that may impact on the shift. Identify and resolve conflict within the team. Participate in team goal setting. Participate in individual and team reviews and provide performance feedback. To ensure that Brewing operational problems are identified and resolved at root cause level. Use brewing problem identification triggers to identify efficiency, quality and waste problems. Follow up on progress made to solve problems identified. Participates in formal Problem Solving. Participates in developing loop closing routines. To ensureasafe working environment where all legal requirements are met in socially responsible manner. Ensure compliance with acts and procedures. Use PPE. Ensure correct storage, handling and disposal of hazardous substances. Report incidents. Adhere to safety and housekeeping standards. Participate in team risk management processes. To ensure compliance of Operational Standards/ System of Company (ISO/ HACCP/ Food Safety/ Laboratory Star System/ etc.) Follow rules, requirements and procedure of operating systems. Participate in System/Standard upgrading and new Standard/ System implementation
အကျိုးအမြတ်: * ကျန်းမာရေး အာမခံထားပေူခြင်း * Group Life Insurance * နေ့လည်စာ စီစဉ်ပေးခြင်း * Ferry ရှိသည် * Overtime payments
Ready To Wear ချုပ်လုပ်နိုင်သူ-
စက်ချုပ်သမား | Sewing clothes
Officer ( Packaging)
Innocreation is looking for officer ( Packaging) positions.
အကျိုးအမြတ်: - overtime. - bouns
- သွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ရမည်။ -လစာ ညှိနှိင်းနိုင်သည် -မန္တလေးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ -နေစားငြိမ်းစီစဉ်ပေးမည်။
Factory တခုလုံးကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းများအချိန်မီရရှိရန်နှင့် ကုန်ကြမ်းပြတ်တောက် မှု မဖြစ်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။ ကုန်ကြမ်းများ အလေအလွင့်အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် လက်အောက်တာဝန်ခံများအား ကြီးကြပ်ညွှန်ကြား ရန်။ Production Plan အရ လိုအပ်မည့်လုပ်သားအရေအတွက်နှင့် Time Schedule များရေးဆွဲရန် လုပ်ငန်းကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန် လုပ်သားများနေရာချထားခြင်း၊ * တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ခွဲဝေခြင်း ကိစ္စများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် * သက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ခံများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ (SOP)ရေးဆွဲရန်။ သတ်မှတ် Plan အတိုင်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းများနေရာချထားမှု (Layout Plan) များရေးဆွဲရန်။ စက်မောင်းနှင်သူများ အန္တရာယ်ကင်းစေရေးအတွက် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ (SOP) ရေးဆွဲရန်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပက်သက်၍ကုန်ပစ္စည်းများ သတ်မှတ်အရည်အသွေးပြည့်မှီစေရေး ၊ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရေး၊ သတ်မှတ်အရေအတွက်အတိုင်း ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးတို့အတွက် ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး ဆောင်ရွက် ရမည့်နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့် (Standard operating procedure) များသတ်မှတ်ရေးဆွဲရန်။ * အထက်အရာရှိ ပုံမှန်အစီရင်ခံခြင်း၊ လိုအပ်သလို ကြားဖြတ်အစီရင်ခံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။ တင်ပြအစီရင်ခံရာတွင် နေ့စဉ်နှင့် လစဉ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ( Daily & Monthly Production Report) ၊ ကုန်ကြမ်းသုံးစွဲမှုအခြေအနေ (Usage of Raw Materials Report)၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်များ (Work Plan) ၊ အရည်အသွေး ပြည့်မီမှု (Quality Control ) အချက်အလက်စာရင်း ဇယားများ ပြုစုတင်ပြရန်။
- လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် ငွေထုတ်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန္။ - ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကိုလက်ခံခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဘေးချိတ်ထားရန္။ - ပြန်လာခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ဈေးနှုန်းပေးခြင်းအပါအဝင် အခြားစတော့နှင့်ပတ်သက်သည့် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန္။ - ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ပေးပို့မှုများကို စာရင်းကိုင်ဌာနသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းရန္။
အကျိုးအမြတ်: * အချိန်ပိုပေးချေခြင်း။ * စွမ်းဆောင်မှု ကျော်လွန်ခြင်းအတွက် ဆုကြေးငွေ
ရာထူး၏ရည်ရွယ်ချက် Brewing Process တွင် ပါဝင်သည့် material intake, material transfer, brewing operation (Braumat V6), additives addition, CIP of brewing vessels, water tanks, CIP vessels နှင့် process lines များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ Malt, ဆန် containersများကို လက်ခံပြီး Silo ထဲသို့ ထည့်ခြင်း အပါအဝင် မှတ်တမ်းများထားရှိပြီး QA နှင့် Warehouse တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ Milling process တွင် ပါဝင်သော aspiration system, destoners, separators, milling systems, weighing scale and conveying system တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ သတ်မှတ်အချိန်ဇယားအတိုင်း ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်သိမ်းမှုများဖြစ်သည့် သန့်ရှင်းရေး၊ ချောဆီနှင့် စစ်ဆေးမှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်း၊ စက်ရပ်ခြင်းများဖြစ်ပွားပါက အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။
ရွှေပေါက်ကံ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
စစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာများကို ပြုစုထိန်းသိမ်းပါ။ ကုမ္ပဏီ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ထုတ်လုပ်မှု အဆင့်တိုင်းတွင် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။ ဒေတာနှင့် အစီရင်ခံစာမူကြမ်းများကို အကဲဖြတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများမှ လွဲချော်မသွားရန် စစ်ဆေးပါ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု မြှင့်တင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းသစ်များကို သင့်လျော်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
ရာထူး၏ရည်ရွယ်ချက် - ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ အဖွင့်၊ အပိတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ - အချက်အလက် မှတ်တမ်းပုံစံအလိုက် တိကျစွာဖြည့်စွက်၍ ထားရှိခြင်း၊ - စက်ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်ရန် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (ပုလင်းအဖုံးများ၊ တံဆိပ်များ၊ ပုံးများ၊ ဗူးများ၊ ကျုံ့သောအရာများ၊ ပူသောအရည်ပျော်ကော်နှင့်ကော်များ) လုံလောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း။ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ - ကုမ္ပဏီ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရမည်။ - အရည်အသွေးချို့ယွင်းမှုရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြဿနာများနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်များရှိပါက ချက်ချင်း သတင်းပို့ရမည်။ - Packaging နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများအားလုံးတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - စက်ပစ္စည်းများမပျက်စီးစေရန် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - Bright Tanks မှ Beer line အကွက်များဖြစ်သည့် Keg, Can, Bottle လိုင်းများသို့ Setup လုပ်ပေးနိုင်ရမည်။ - ထုပ်ပိုးမှုများတွင် လက်ရှိထုတ်ကုန်နှင့် logo များကိုက်ညီမှုရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ - ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာတွင် သန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ဓာတုပစ္စည်းများကို ဘေးကင်းစွာကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: နေ့လယ်စာစီစဉ်ပေးခြင်း။ ကျန်းမာရေးအာမခံစီစဉ်ပေးခြင်း။
ရန်ကုန်ပြင်ပ နယ်မြို့များသို့ ပစ္စည်းများပေးပို့နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ Project/Sub Com အလိုက် စာရင်းရှင်းလင်းမှုများ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊အစီရင်ခံစာများ ရေးသားပေးပို့ခြင်း။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း(မြောင်းတကာ၊ရွှေပြည်သာ၊လှိုင်မြို့နယ်နှင့်အခြားမြို့နယ်)များမှ ပေးပို့သော ပစ္စည်းများအား သယ်ယူသိုလှောင်ခြင်း။ စတိုနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များအား နယ်ရုံးခွဲများသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ။ Strategically manage warehouse in compliance with company’s policies and vision Setup layout and ensure efficient space utilization Control and manage all store record. Check stock in/out/balance. Manage and check receive/issue/balance record. Prepare and manage all record summaries. Report monthly stock balance to account. Review store security log book to ensure completion and accuracy. Manage stock control and reconcile with data storage system Maintain standards of health and safety, hygiene and security